နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားကို စမတ်ကတ် အဖြစ် ပြောင်းလဲရေး ယခုနှစ်အတွင်း စတင်မည် - Yangon Media Group
နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားကို စမတ်ကတ် အဖြစ် ပြောင်းလဲရေး ယခုနှစ်အတွင်း စတင်မည်
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားများကို စမတ်ကတ်ပြောင်းလဲထုတ်ပေးနိုင် ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အား ယခုနှစ်အတွင်း စတင်မည်ဟု အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အားဝန်ကြီးဌာနကသိရသည်။ လက်ရှိထုတ်ပေးထားသည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားများကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ စမတ်ကတ်ပြောင်းလဲထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်အပါအဝင် နိုင်ငံတကာနည်းပညာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆွေးနွေးမှုအကြိမ်ကြိမ်ပြု လုပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိတစ်ဦးက ဖေ ဖော်ဝါရီ ၂၄ တွင် ပြောသည်။
”နိုင်ငံတကာအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ ဆွေးနွေးမှုကတော့အကြိမ် ၆ဝ လောက်အထိ ပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်တယ်။ လက်ရှိမှာတော့ နိုင်ငံတော် အဆင့်ကနေ ဒီကိစ္စကိုအကောင် အထည်ဖော်ဖို့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း တွေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်ကြဖို့ ခွင့်ပြုချက်လည်းကျလာပြီဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
၁၉၈၂ ခုနှစ်ဥပဒေအရ ထုတ် ပေးထားသည့် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံ တင်ကတ်ပြားများကို စမတ်ကတ် အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သူများ၏ biographic data နှင့် biometric data များရရှိမည်ဖြစ်ပြီး national data base တည်ဆောက်ထိန်း သိမ်းနိုင်မှသာ ပြည်သူများကို ဝန် ဆောင်မှုပေးနေသည့် ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အချက်အလက်များ မျှ ဝေသုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း e-government စနစ်ကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
”အဲဒီအတွက်ကို ကော်မရှင်၊ ကော်မတီတွေ ဖွဲ့ရမယ်။ သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေ သတ်မှတ်ရမယ်။ ဒါတွေက နိုင်ငံတော် အဆင့်အနေနဲ့ တင်ဒါခေါ်ယူပြီး တော့ ဆောင်ရွက်ရမယ်။ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကတော့ အများကြီးပါပဲ” ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။
စစ်တွေ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်မည်ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် ဝ
အမေရိကန်အရှေ့ဘက် ကမ်းရိုးတန်း စစ်စခန်းများရှိရာသို့ ဖလောရင့်စ် ဟာရီကိန်း ဝင်ပြီ၊ အပျက်အစ??
သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု ကျူးလွန်သူများကို သေဒဏ်ပေးရန် အိန္ဒိယအစိုးရ အတည်ပြု
သထုံရွှေစာရံစေတီတော်နှင့် မြသပိတ်စေတီတော်တို့၌ထားရှိရန် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဆရာတော်များက ကြေ??